कृषिमन्त्री भन्छन्- पतञ्जलीको भन्दा डीडीसीको घ्यु गुणस्तरीय ! - अस्तित्व
Home›देश›कृषिमन्त्री भन्छन्- पतञ्जलीको भन्दा डीडीसीको घ्यु गुणस्तरीय !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ साल वैशाख १ गते रारातालको किनाराबाट देशबासीलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए-एकजना नेपाली पनि भोकै मरेमा सबै नेपालीले खान पाएका छन् भन्न सकिन्न । ओलीको यो भनाइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेपछि कानुनसरह भएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा भोकमरीले मान्छे नै मरेको समाचार त आएका छैनन्, तर हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा हाम्रो उत्पादन होइन, आयातीत बस्तुको मात्र धेरै छ । नेपाली लोकोक्ति छ, बेसाएको अन्न खानुभन्दा भोकै बस्नु जाति । यदि यो लोकोक्ति सही हो भने, आयातीत चामल खाएर बस्नुभन्दा भोकै बस्नु जाति भन्नुपर्ने हो ।
तर, यस वर्षमात्रै ३० अर्बको धान चामल सरकारले आयात गरेको छ । यही रफ्तार बढ्दै जाँदा हामीले खाने प्रत्येक गाँस बेसाएको अन्नबाट तयार हुनेछ । तर, सरकारले भने ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने र आधारभूत खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।
के हामी कम्तिमा दालभात, तरकारी र दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौं ? हामीले कृषि तथा पशुपंछी मन्त्री चक्रपाणि खनाल बलदेवसँग यही प्रश्नबाट कुराकानी शुरु गर्‍यौं-
एकजना पनि नेपाली भोको रहृयो भने सबैले खान पाएको छ भन्न मिल्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारको नीति कार्यक्रममै परेको छ, सँगसँगै कृषि उत्पादन दोब्बर बनाएर आत्मनिर्भर बन्ने कुरा पनि छ, यो कति सम्भव देख्नुभयो तपाईले ?
विश्वासचाहिँ मलाई शतप्रतिशत छ । यो चार/पाँच महिनामा मैले कृषिमा हामी किन परनिर्भर हुँदैछौं र आत्मनिर्भर बन्न के गर्दा सकिने रहेछ भन्ने पहिचानसम्म गर्न सफल भएको छु । मैले शुरुमा भूमि समस्या हल गरेरमात्रै कृषि समस्या हल हुने भन्ने बुझेर भूमी सम्बन्धी कानुन बनाउन लागेँ । अब कृषिमा ध्यान दिँदैछु ।
हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो
नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो उब्जनीलाई आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने भनेर आएको छ । अहिले कृषिमा मैले देखेको समस्या भनेको हाम्रो व्यवसायिक खेती नै छैन । व्यवसायिक खेती शुरु गर्नका लागि हामीले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि जमिन एकै ठाउँमा चाहिन्छ । नेपालको पहिलो चुनौति भनेकै यही हो, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि । यसलाई पूरा गर्न सकियो भने ५ वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन सम्भव छ ।
अहिलेको एक्काइशौं शताव्दीमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा सबै कुरामा सम्भव छैन । कतिपय उत्पादन हाम्रो देशमा नहुन सक्छन् । संसारभर विनिमय पनि चलिरहन्छ । तर, मुख्य वस्तु जुन यहाँ उत्पादन हुन्छन्, त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । हाम्रो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता ऐन संसदमा जाँदैछ । त्यसले पनि के भनेको छ भने कुनै पनि व्यक्ति खान नपाएर जोखिममा पर्ने अवस्था आउनुहुँदैन र खाद्य सुरक्षा मौलिक अधिकार हो भनेरै कानुन बन्ने हो ।
सबैमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न, तर दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न ?
दालभात, तरकारी र रोटीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । हामीले अहिले पनि हामीसँग उत्पादित चिजलाई व्यवस्थापपन गर्न नसकेर परनिर्भरता बढेको रहेछ । राज्यको पहल पनि नभएको र जनचेतना पनि नपुगेको कारण आफ्नै उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कोही पनि व्यवस्थित भएनौं । हाम्रो उब्जनी छ, अन्न पनि छ, तर त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नेतिर अहिलेसम्म राम्रोसँग कामै भएको छैन ।
हामीले चिनीको भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि हाम्रो चिनी किलोको ८० रुपैयाँ हुने रहेछ बजारमा पुग्दा । तर भारतबाट आउने चिनी चाहिँ ३० प्रतिशत भन्सार तिरेर आउँदा पनि ६५ रुपैयाँ हुनेरहेछ
दोस्रो कुरा, हामीले अहिले करिव करिव २५ अर्बको चामल आयात गरेका छौं । त्यसमा सबैभन्दा धेरै झण्डै ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मसिनो चामल आयात गरेर खाँदा रहेछौं । यसको अर्थ नेपालीहरुले मसिनो चामल बढी प्रयोग गर्न थाले भन्ने देखिन्छ । या त त्यो चामल बाहिरबाट नेपाल आएर यहाँको बाटो हुँदै बाहिर गएको छ । होइन भने हामीकहाँ अस्वाभाविक रुपमा मसिनो चामल किन आयात भइरहेको छ भन्ने गम्भीर अध्ययन जरुरी छ, जसले हामीलाई परनिर्भर बनाएको कारण पत्ता लगाउँछ ।
मसिनो चामल आयात शंकास्पद भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीकहाँ व्यवस्थित र अत्याधुनिक मिल नभएका कारण हाम्रोमा उत्पादन भएको धान अनधिकृत रुपमा सीमापारी भारतका मिलमा जाने र चामल बनेर आउँदा बैधानिक बाटो अर्थात भन्सारबाट आउने गरेको देखियो । हाम्रो आफ्नै उत्पादन चोरबाटोबाट बाहिर जाने र बैधानिक बाटो भएर भित्रिने गरेको छ ।
यस्तो गर्दा किसानलाई वा ब्यापारीलाई के फाइदा ?
माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा छौं । तर, सस्तो पाइन्छ भनेपछि मान्छे मरेपछि लास नकुहियोस भनेर प्रयोग गरिने थर्मलिन जस्ता खतरनाक रसायन हालेर ल्याइने भारतीय बजारका माछा खाइरहेका छौं
यस्तो किन हुन्छ भने, हाम्रो सीमाना खुला छ । धान उत्पादन हुन्छ तराई मधेसका फाँटहरुमा । त्यो सीमानाको एक किलोमिटर पारि लैजानेवित्तिकै त्यहाँ अत्याधुनिक मिलहरु छन् । ती मिलमा चामल कुटिन्छ । मोटोलाई मसिनो बनाउने र कलरिङ दिने मिलहरु पनि छन् । अनेक प्रकारका अखाद्यहरु मिसावट गर्ने र त्यसलाई मसिनो चामल बनाएर बैधानिक बाटो भएरै ल्याउने गरिएको पाइएको छ । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी लागेका छौं ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो नीतिमा पनि समस्या छ । हामी विश्वव्यापार संगठनमा छौं । हामीजस्ता देशले चीन र भारतजस्ता ठूला देशसँगको आयात-निर्यात गर्ने सन्दर्भमा कहिँ न कहिँ नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने त हाम्रो बस्तु चाहेर पनि उनीहरुको बजारमा जान नसक्ने र उनीहरुका बस्तु बाध्यतावस हामीले किन्नुपर्ने र आउनलाई रोक्नै नसक्ने अवस्था बढिरहने छ ।
यसको मतलब दालभात, तरकारी र रोटी पनि नेपालीले बाहिरबाट बेसाएरै खाइरहनुपर्ने हो त ?
दूधमा हामी २ वर्षभित्र पूरै आत्मनिर्भर हुन्छौं । २ वर्षमा माछामा आत्मनिर्भर हुन्छौं । गहुँमा अहिले नै आत्मनिर्भर छौं । अण्डामा हामी आत्मनिर्भर छौं । मासुमा आत्मनिर्भर बन्न अहिले गाह्रो देखिएको छ
यो अवस्थाचाहिँ हामी अब बढीमा ३ वर्षभित्र अन्त्य गर्छौं । गहुँमा हामी झण्डै झण्डै आत्मनिर्भर छौं । त्यसलाई व्यवस्थापन गरे पुग्छ । तरकारी पनि हाम्रो धेरै राम्रो उत्पादन छ । यहाँको उत्पादन सड्न गल्न दिएर बाहिरको ल्याएर खाने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसमा रोक लगाउन सकिरहेका छैनौं ।
हाम्रै तरकारी अलिकति महँगो परे पनि खाने र बाहिरको आयातलाई भन्सार बढाएर भने पनि निरुत्साहित गर्ने हो भने तरकारीमा पनि हामी तत्कालै आत्मनिर्भर बन्छौं । टमाटार नै भन्नुस, यहाँ बजार नपाएर फालिन्छ, बाहिरबाट सस्तोमा ल्याएर खाएका छौं ।
माछामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्थामा छौं । तर, सस्तो पाइन्छ भनेपछि मान्छे मरेपछि लास नकुहियोस भनेर प्रयोग गरिने थर्मलिन जस्ता खतरनाक रसायन हालेर ल्याइने भारतीय बजारका माछा खाइरहेका छौं ।
होइन, यो त तर्क नै भएन नि, उपभोक्ताले त जुन सस्तो पाइन्छ, त्यही किनेर खान्छ नि होइन र ? आफ्नो उत्पादन सस्तो बनाउन सकिन्न ?
सक्नुपर्छ । तर, पनि भारतीय उत्पादनमा ठूलो मात्रामा सरकारी अनुदान छ । त्यसले गर्दा हाम्रो कुनै पनि उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, यसलाई हल गर्न हामी अब लागेका छौं ।
भारतीय बजारबाट आउने तरकारी, माछा जस्ता उपभोग्य वस्तुजत्तिकै सस्तो हाम्रो उत्पादनलाई बनाउन केही काम थालेका छौं । यसले काम गर्नेवित्तिकै एकाध वर्षमा तरकारी र माछामा पनि आत्मनिर्भर बन्छौं ।
यसको अर्थ बाहिरबाट आउनेलाई कडाइ गर्ने र देशभित्रका कृषि उपजलाई अनुदान दिने भन्न खोज्नुभएको हो ?
पहिलो वर्ष बाँझो राखे सचेत गराउने, दोस्रो वर्ष पनि बाँझो राखे त्यहाँको स्थानीय तहले वरिपरिको छिमेकीलाई उब्जनी गरेर खान दिने र तेस्रो वर्ष पनि त्यो जग्गाधनी खेती गर्न आएन भने सो जग्गा या त कमाइराखेको व्यक्तिलाई दिने वा राज्यले लिनेखालको नीति नबनाएसम्म हुँदैन
एकदम सकिन्छ र सक्नुपर्छ । म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई । म कृषि मन्त्री भएर आएपछि के गरेँ भने, दूधको ठूलो समस्या रहेछ । एउटा त गुणस्तरीय दूध भएन, दोस्रो यसको व्यवस्थापन भएन । अर्थात बजारमा दूध सप्लाई हुन नसकेर किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आयो ।
गत वर्ष झण्डै ५० लाख लिटर धूलो दूध भारतबाट आयात गरिएको रहेछ । तर अहिले आयात गर्नु त परै छाडौं, हाम्रै दूध व्यवस्थापन गर्न नसकेर हैरानी छ ।
हिजोका दिनमा भारतमा अनुदानमा उत्पादन भएको धूलो दूध बढी मात्रामा आयात हुन्थ्यो, जसले गर्दा भारतीय धूलो दूध बजारमा गयो । हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोखियो । हाम्रो दूधलाई धूलो बनाउन एउटामात्रै कारखाना छ, त्यसले सीमित मात्र काम गर्छ । चितवनको कारखाना बन्द भएर बसेको छ ।
मैले के गरेँ भने पहिलो काम धूलो दूध आयात गर्ने अनुज्ञापत्र रोक्ने । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयबाट दिइने त्यो पत्र रोकियो । अहिले धूलो दूध आयात गर्न बन्द गर्‍यौं । हाम्रो डीडीसीले ३ सय मेटि्रक टन धूलो दूध आयात गर्न टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यो टेण्डर मैले रद्द गर्न लगाएँ ।
त्यसपछि हाम्रो उत्पादनको दूध अहिले अलिअलि व्यवस्थापन हुन लागेको छ । हाम्रो बिराटनगरमा उत्पादन गरिएको धूलो दूध बजारमा बेच्नका लागि स्टक राख भनेको छु । दूधमा हामी यसरी आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुग्यौं । तर, पनि हाम्रो उत्पादन महंगो छ, बाहिरी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकिन्न ।
भरतपुर महानगरमा रेणु र पार्वतीको ‘शीतयुद्ध’ छताछुल्ल
अवैध हातहतियारसहित १ वर्षमा २४२ पक्राउ
‘हाइ अलर्ट’ सुरक्षा आजदेखि
बन्दले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन प्रभावित
प्रदेश सुरक्षा बैठक हेटौंडामा सुरु, गृहमन्त्री भोलि आउने